अस्पताल र रेडक्रसको चरम लापरबाहीका कारण २३ वर्षीया सुत्केरी गंगादेवीको मृत्यु, गल्ती कसको ? « News24 : Premium News Channel
अस्पताल र रेडक्रसको चरम लापरबाहीका कारण २३ वर्षीया सुत्केरी गंगादेवीको मृत्यु, गल्ती कसको ?
जनकपुरधाम, २३ साउन । श्रीमतीलाई सुत्केरी व्यथा लागेपछि राजकिशोर महतो निकै खुसी थिए, किनभने उनीहरु पहिलो सन्तानको पर्खाईमा थिए । तर, राजकिशोरको उक्त खुसी धेरै बेर टिक्न सकेन । राजकिशोरले पहिलो सन्तानकोरुपमा छोरी पाए तर, आफ्नो श्रीमतीलाई बचाउन सकेनन् ।
अस्पताल र रेडक्रसको लापरबाहीका कारण उनले आफ्नो २३ वर्षीया श्रीमती गंगादेवी महतोलाई गुमाए । जनकपुरधामस्थित रामजानकी अस्पतालमा महोत्तरी गौशाला नगरपालिका–११ भरतपुरकी २३ वर्षीया गंगादेवी महतोको मृत्यु भएको हो ।
अस्पताल र रेडक्रसको चरम लापरवाहीका कारण श्रीमती गंगादेवीको मृत्यु भएको राजकिशोरको आरोप छ । ‘ओ’ पोजेटिभ ब्लड ग्रुपको साटो ‘बी’ पोजेटिभ ब्लड चढाएपछि शुक्रबार बिहान ९ः३० बजे गंगादेवीको मृत्यु भएको हो ।
अस्पताल र रेडक्रसकै चरम लापरवाहीका कारण सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएपछि परिवारले शव उठाउन मानेका छैनन् । मृतकको शव भने अहिले पनि रामजानकी अस्पतालको आईसीयूमा राखिएको छ ।
परिवारजनले शव उठाउन नमानेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषाले परिवारजन र रगतको पोका दिने रेडक्रसका पदाधिकारीहरुलाई सोधपुछका लागि बोलाएको छ ।
लापरवाही अस्पतालको कि रेडक्रसको ?
गंगादेवी महतोको सुत्केरी हुने समय नजिकिएपछि श्रीमान राजकिशोर श्रीमती गंगादेवीलाई लिएर महोत्तरीको बर्दिवासस्थित स्वस्तिक अस्पतालमा चेकजाँच गराउन पुगे । जहाँ अल्ट्रासाउण्ड गराउँदा चिकित्सकहरुले बच्चाको तौल साढे ३ किलो भएको र आमा कमजोर भएकीले अप्रेशननै गर्नुपर्ने सुझाए ।
चिकित्सकको सल्लाह अनुसार नै आफूहरु जनकपुरधामस्थित रामजानकी अस्पताल पुगेको मृतकको देवर रामहरि महतोले बताए । उनले भने, ‘विहीबार अपरान्ह ४ बजे अस्पतालमा भाउजुलाई भनाई गराइसकेका थियौं । यहाँ पनि चिकित्सक शैलेन्द्र साहले अपरेशनमार्फत् नै सुत्केरी गराउन सल्लाह दिएपछि सोही अनुरुप अपरेशनको प्रकृया अगाडि बढाइयो ।’
शल्यक्रियापछि गंगादेवीले छोरीलाई जन्म दिइन् । शल्यक्रिया गर्नु अगाडिनै गंगादेवीलाई रगतको आवश्यक पर्ने भन्दै १ पिन्ट रगतको व्यवस्था गर्न अस्पतालले भनेको थियो ।
चिकित्सकहरुले गंगादेवीको रगतको स्याम्पलसहित रगत ल्याउन भनेका थिए । रेडक्रसले गंगगादेवीको ब्लड ग्रुप ‘बी’ पोजिटिभ रहेको र श्रीमान राजकिशोरको पनि सोही ब्लड ग्रुप रहेकोले उनले आफ्नो श्रीमतीलाई एक पिन्ट रगत दिए । त्यतिखेरसम्म गंगादेवीको अवस्था सामान्य नै थियो ।
तर, रेडक्रसले दिएको रगतको पोका चढाउन थालेसँगै सुत्केरीको अवस्था गम्भीर हुन थालेको र तत्काल रगत चढाउन बन्द गरेको अस्पतालको प्रशासन शाखाका प्रमुख विकासचन्द्र गुप्ताले बताए ।
त्यस्तै, उक्त रगत अस्पतालकै ल्यावमा जाँच गर्दा ‘ओ’ पोजेटिभ रिपोर्ट आयो । साथै, रेडक्रसले पनि ‘ओ’ पोजिटिभ रगत नै दिएको गुप्ताले बताए ।
उनले भने, ‘बी’ पोजिटिभ ब्लड ग्रुप ठहर गरेको रेडक्रसले, सोही रगतलाई फेरि कसरी ‘ओ’ पोजेटिभ ठहर ग¥यो ? हामीले ल्यावमा जाँच गरेपछि मात्रै ‘ओ’ पोजेटिभ रहेको थाहा पायौं । यो हाम्रो लापरवाही होइन, रेडक्रसको लापरवाही हो ।’
गंगादेवीलाई फरक ब्लड ग्रुपको रगत चढाइएकै कारण मृत्यु भएपछि परिवारजन आक्रोशित भएका छन् । मृतकका ससुरा अजवलाल महतोले आक्रोशित हुँदै भने। ‘यिनीहरु डाक्टर हुन् कि ज्यान लिने डाकु । उनीहरुलाई कारबाही नभएसम्म हामी चुप बस्दैनौं ।’
गंगादेवीकी श्रीमान राजकिशोरले भने ‘मेरो सन्तान त स्वस्थ छ । तर, यी ज्यानमारा डाक्टरहरुका कारण मेरो श्रीमती अब यस संसारमा रहिनन् ।’
रेडक्रस धनुषाका सभापति नरेश सिंहले यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको र कहाँ गल्ती भएको हो ? भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताए ।
जनकपुरधामको प्याथोलोजी रिपोर्ट कति भरपर्दो ?
जनकपुरधामको प्याथोलोजी रिपोेर्टमाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ । प्याथोेलोेजी रिपोर्टले उपचारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । प्याथोलोजी रिपोर्ट नै गलत हुँदा उपचार पनि गलत हुने चिकित्सकहरुको भनाइ छ ।
सोही कारण गंगादेवी महतोको विषयमा पनि प्याथोेलोजी रिपोर्टको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । जनकपुरधामकै रामजानकी डाइग्नोष्टिक सेन्टरमा ३ महिना अगाडि ब्लड ग्रुप जाँच गराउँदा ‘बी’ पोजेटिभ भनिएको थियो । तर अहिले आएर सोही महिलाको ब्लड ग्रुप जाँच गर्दा ‘ओ’ पोजेटिभ पाइएको छ ।